Kusukela ngo-2010, izakhamuzi ezihlala endaweni Russian Federation, kukhona amawebhusayithi ekhethekile lapho abazali angashiya kuwo wonke isicelo enkulisa. Izinzuzo ezinjalo irekhodi electronic itholakala lokuthi ukuthi awudingi ukuba ngokwabo bavakashela uMnyango wezeMfundo. Umuntu udinga kuphela ukuya khasi libonisa ukuthi lonke ulwazi mayelana nokuthi uyithola kanjani inombolo emgqeni enkulisa. Futhi ungakwazi ukulandelela inthanethi.
I ewusizo irekhodi electronic?
Hlukanisa izinzuzo main of okufakiwe inthanethi:
Ubhalisa ingane kuya esikhungweni nge-Internet.
emgqeni Electronic enkulisa - kuba inzuzo kulabo abazali abangakwazi bashayise emsebenzini ngesikhathi esifanele ukuqopha.
Ungathola ukuthi enkulisa kubhekwa njengento okufanele ize kuqala ngawe.
Imibandela efanayo zenzelwe ngengane ngayinye.
Ithuba ukuqapha traffic inambalayini isicelo.
I elula emgqeni electronic enkulisa? Ekwakhiweni ingane kwi-akhawunti ku-intanethi, kusukela induduzo ekhaya, kuba lula kakhulu esingaphezu kwamahora ambalwa emi emigqeni. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi kwabesifazane abaku- sokubeletha. Awunayo ukushiya ingane eyodwa, futhi akudingeki ukuba ahambe naye ngokusebenzisa wonke umuzi.
Ngingasitholaphi emugqeni enkulisa? Lena akunandaba ngempela. Ibhayisikobho ngayinye liye ezinemininingwane imiyalelo, othi abazali kumelwe benze ukubhuka indawo yakho. Cishe bonke abantu abavumayo ukuthi irekhodi electronic - inketho esikahle kakhulu.
Ngaphezu ezicini ezinhle emgqeni electronic enkulisa, kukhona nemibi. Ngokwesibonelo, uma unquma ukushintsha usuku kokuthola enkulisa noma ushintshe ingqondo yakho, ngeke sikwazi ukulungisa ngesikhathi sangempela. Kunezikhathi lapho isaziso kuziwa ingane yokutholwa, kodwa ngokuya isayithi, ungakwazi ukulithola ohlwini. Yiqiniso, akukho uhambo ulwazi inkonzo, awukwazi ukukwenza. Izakhamizi nemikhakha ekhethekile uzodinga ukubhalisa imibhalo efanele.
Abanye abazali abangethembi Amarekhodi ngogesi futhi uthanda ukuxoxa nabantu bangempela abadinga ukukhiqiza imibhalo efakazela, ukuqinisekisa ukuthi ingane ungeniswe esikhungweni.
Indlela ukurekhoda umntanakho zasenkulisa?
Uma uye kuwebhusayithi, hamba ngenqubo sokubhalisa, ngesikhathi lapho kuzodingeka ukunikeza ikheli le-imeyili, igama lomsebenzisi ukhethe iphasiwedi. Uma ufaka kwesigaba "Call for Izinhlelo" futhi ugcwalise zonke lezi amasimu, lapho ucacise inombolo kanye uchungechunge passport, usuku lokuzalwa kwengane, futhi ngonyaka uma ufuna ukuyithumela sikhungo. Kube uzoboniswa kanjani ukuthola indawo engadini.
Ngemva kwemizuzu embalwa ngemva inthanethi isicelo kuhanjiswa, ungakhetha engadini. Ngemva kokuthola lo e-mail ukuthumela amakhophi yephasiphothi yakho kanye neminye imibhalo inhloko yesikhungo.
Ithini inombolo umugqa futhi kanjani ukuthola oda enkulisa? Lena ikhodi esiyingqayizivele, okuyinto ngokuzenzakalelayo ibalwa uhlelo. Abantu abaningi ukubuza imibuzo kwi izinkundla zendlela yokuthola emugqeni enkulisa. Akukho lutho nzima. Uma ubhalisa kwisayithi, ikheli lakho le-uzothola umlayezo ovela ekuphathweni isayithi nge inkomba inombolo yakho umugqa ku eniyokwazi ukulandelela izinguquko.
Ukuze idatha yengane yakho uvele ekhasini, futhi yafakwa irekhodi esikhungweni, abazali kuye kudingeke ukuba banikeze imvume yabo ukuthunyelwa idatha. Kungenjalo, ukurekhoda liyokhanyisa phambi ekamelweni lakho ukuthi akuyona imvume yabazali ukubhekisiswa.
Wazi kanjani ngesimo kulayini electronic?
Okwamanje, ngesikhundla sakhe kulayini ingatholakala uMnyango wezeMfundo ongoti edolobheni lakho. Awusenayo ukuze uhambele zonke izikhungo emzini, ulwazi olufanele inikezwa yi abaphathi.
Funda mayelana nendlela uthole inombolo emgqeni enkulisa, ungakwazi ukulandelela isimo salo. Ngokufaka indawo ngomzana, uzobona uhlu izicelo obhalisiwe, okuzoba ekamelweni lakho. Kungaba ugcine ithrekhi lonke isikhathi kuze uthola Isevisi eceliwe. Ongawabhuka indawo emgqeni electronic ngesikhathi sokuzalwa. Kungcono ukhombise ngonyaka yokwemukela enkulisa.
Yiqiniso, esakhiweni lapho ungakwazi ukubhalisa ingane ezikhungweni pre-school, it has nezihibe, ngoba uhlelo namanje okuyiphutha. Ezinye izicelo ithunyelwa kabili, noma cha wathumela ngaso sonke. Izaziso woza nje kwezinyanga ezimbalwa. Ngisho uzitshela ukuthi konke kuhambe kahle, wena usitholile isaziso, usuthole inombolo yakho kulayini electronic, asikho isiqinisekiso sokuthi uzothola endaweni isikhungo sakho esikhethiwe. Njengoba izingane abamukeli aphume ithuba (okungukuthi, zinikelwe indawo phambi kwakho), izindawo ke kamuva nje ngeke kwanele.
Umphimbo obuhlungu ngaphandle imfiva. Kuyini lokhu?